Kooxaha Soomaalidu maxay ku diidan yihiin shirka Eldoret?
Tan iyo markii ay ku dhawaaqday dowladda Kenya inay gogol dib u heshiisiin ah u fidinayso Soomaalida kala hayaantay waxaa ka soo baxayey qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxaha dacaayado ay ku muujinayaan inaysan raalli ka ahayn shirkaas dib u heshiisiinta.
Waxaa meeshaas ka cad in nimanka doonaya inay Soomaaliya hoggaamiyaan aysan raalli ka ahayn wixii ka soo horjeeda dantooda, ayna diidayaan danta dadka ay rabaan inay xukumaan. Gees ka gees, meel kasta oo ay Soomaalidu degto waa laga taageeray shirka Eldoret, waxaase la yaab leh waxa ay ku diidayaan meesha shacabka intiisa badani u xusul-duuban yahay.
Hoggaamiyeyaasha kooxaha oo iyagu muddo 12 sano ah ku horgudbanaa xasiloonida iyo in Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto waxa ay garwaaqsadeen inaysan ka heleynin shirkani waxa ay doonayaan, waxaana ay dareemeen in dantoodu ay laalan tahay.
Illaa hadda, sida wararku nagu soo gaarayaan, waxaa shirka qaadacay hoggaamiye kooxeedyada magaalada Muqdisho qaarkood, sida Cusmaan Xasan Cali (Caato), Maxamed Qanyare Afrax, Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Finish), Mowliid Macaani Maxamuud iyo kuwo kale. Muuse Suudi Yalaxow isagu ma taageerin, mana ka soo horjeesan shirka.
Raggan oo shalay war ka soo saaray Xamar waxa ay cambaareeyeen xubnaha Soomaalida ah ee lagu daray Guddiga la-talinta shirka. Si kasta oo warkooda ay u dhigaanba, xaqiiqadu waxa ay tahay inay fogeynayaan Soomaalida oo beddelkeeda ay jecel yihiin shisheeyaha aan dhaqan garan karin.
Shir kasta oo la qabto, waxaa caado u ah hoggaamiyeyaasha kooxuhu inay saxiixaan heshiis-qoraalyo aysan fahamsanayn waxa dhab ahaan ku qoran. Shir kasta oo la qabtay waxa uu ku soo dhammaan jiray qado hoggaamiye kooxeed ku cunay hotel 5 Star ah.
Run ahaantii, waa ogyihiin in qadada uu cunayo uu xaq u leeyahay miskiinka gacanta go’an ee lugta ka dhaawacan ee feeruhu u qaawan yihiin ee taagan isgoysyada Soomaaliya. Waxaa nasiib darro ah in shacabka Soomaaliyeed ay kala xir xirteen rag daneystayaal ah oo eeganaya ganacsigooda.
Ma oggola in doorasho lagu kala baxo, mana doonayaan in Soomaaliya ay heshiiso. Nin walba waxa uu ku qanacsan yahay inta kilometer ee uu ka taliyo, waxaana uu qabaa inuu dagaallamo dantiisa. Abwaan Maxamed Sahal oo ka gabyey xarun raggani joogeen, waxa uu yiri “Hoggaamiye kooxeedyada xeyraamayow, dhimma xawaareynta, xirfad kale la soo baxa, dagaal waa xaraar yahaye.”
Mid kasta oo ka mid ah raggan waxaa ku hareereysan maliishiyo hubeysan oo aad ka naxayso aragtidooda. Waxa ay leeyihiin wejigii Sylvester Stallone, laakiin ma hurdaan, waxaana ay liqaan Qaadka. Raggani waxa ay ku taamayaan inay awood ku gaaraan kursiga.
Dabcan, rajo taagan ayay u ahaan lahayd shacabka Soomaalida haddii hoggaamiye kooxeedyadu ay dhexdooda is leyn lahaayeen, sida ka dhacday dalka Liberia. Midkood uun baa soo hari lahaa. Laakiin, bilcaksi, dhammaantood waa heshiis, waxaana ay ka siman yihiin burburinta iyo cunaqabateynta tiirarka nolosha bulshada.
Ragga noocaas ah ayaa raba inay Soomaaliya ka noqdaan Madaxweyneyaal, Ra’iisal Wasaareyaal, Wasiirro, Wasiir Ku-xigeenno, Safiirro, Diblomaasiyiin iwm. “Soomaaliya waa dalka dunida ugu nasiibka darran,” sidaas waxaa yiri diblomaasi African ah oo Kenya ku sugan. “Nimanka noocaas ah ayaa u taliya” ayuu sii daba dhigay.
Waxaa hubaal ah inay lug jiidayaan shirka dib u heshiisiinta ee Soomaaliya ee ka dhici doono Kenya. Nabadda Soomaaliya, waxaa kaloo iyaguna caqabad ku ah Dowladda KMG oo ka sii mid noqotay kooxihii awalba ummaddu ay xamili kari weyday culeyskooda. Ku-meel-gaarku, waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen inaysan tagaynin shirka Eldoret haddii aan la casuumin maamulka Waqooyi Galbeed ee Somaliland.
Arrintaas, waa caqabad kale oo la dhihi karo waa “isbaaro siyaasadeed.” Wax kasta oo ay kaga jeedaan, qolada Ku-meel-gaarka waxaa u shidan nalka cagaaran. Shuruudda ay ku xireen iyo mowqifyada is daba yaalla ee ay shirka ka qaateen ayaa astaan u ah inay wadnaha farta ku hayaan.
Qolaba qolada kale ayay ka welwelaysaa. Cabsida Ku-meel-gaarku qabaan waxa ay tahay in lagu xaaqo shirka, lagana dhigo shaarka dowladeed, halka hoggaamiye kooxeedyaduna ka aaminsan yihiin inuusan shirku dhegeysanayn ra’yigooda ee waraaqo laga saxiixayo. Labada dhinac waxaad mooddaa in la isaga dhex baxay oo ay yaraatay hoos wax ugu sheeggii dowladaha deriska ah.
Dowlad ahaan iyadoo loo aqoonsan yahay Ku-meelgaarku, haddana gef ma aha in nin kasta oo dowladda ka tirsan lagu soo oogo dacwad haddii uu dambiile yahay ama ay jirto cid u haysata dacwad, sida hadeerba ka socota dalka Germany. Hoggaamiye kooxeedyaduna waa la mid.
Sideedaba Soomaalida waxaa ka maqan waxa la yiraahdo dhab-u-xisaabtanka. Waa in la xisaabiyaa qof kasta oo dalka dambi ka galay, waxaase lagu muransan yahay xisaabtanka goorta uu billaabanayo. Ma 1954-kii ayaa laga billaabaa. Ma 1960-kii. Ma 1969-kii. Ma 1991-kii. Mise 2002?
Soomaaliya in la is xisaabiyaa waa mucjiso marka la eego taariikhda casriga ah, maxaa yeelay si lixaad leh ayaa wax loo kala dilay, wax loo kala dhaawacay, wax loo kala xaday oo xitaa wax walba loo kala marooqsaday, hase ahaatee waa marag ma doonto in mar ay noqotaba la is xisaabin doono.
Saameyntooda waxaa kaloo leh qolooyinka bulshada rayidka ah (Civil Society Group), kuwaas oo yuhuun badan u qaba inay shirka ka qayb galaan, fekerkoodana la siiyo mudnaan. Bulshada Rayidku, waxa ay fashilka la wadaagaan hoggaamiyeyaasha kooxaha, waayo shirkii Carte iyaga ayaa dowladda KMG soo dhisay.
Su’aasha meesha taalla, waxa ay tahay “xaggee ayay uga hareen dowladdii ay soo dhiseen, maxaase ku kallifaya inay shirkan daba yaacaan.” Waa la dhihi karaa waa ku hungoobeen, waase inay qirtaan fashilkooda. Hadallada faraha badan ee ka soo yeeraya, waxa ay ka dhigan tahay murtidii Soomaaliyeed ee ahayd “waan socon weynaye, aan orodno” oo ay u beddeleen “waa na loo yeeri diidaye, aan isu yeerno.”
Hoggaamiyeyaasha kooxuhu, waxa ay qabaan in Ku-meel-gaarku ay ku tiro badsanayaan bulshada rayidka, waana ka soo horjeedaan inay shirka ka soo qayb galaan, halka dowladduna ay ku adkeysanayso inay shirka yimaaddaan bulshada rayidka oo aan meesha laga saarin.
Doorka beesha caalamka ayaa lagama maarmaan u ah miraha ka soo bixi doona shirka dib u heshiisiinta Soomaaliya, inkastoo weli la la’ yahay culeyskii siyaasadeed (political pressure) ee la rabay inay saaraan cid kasta oo nabadda Soomaaliya ku dhex mergan.
Maamulka Mareykanku, mowqifkiisa si toos ah iyo si dadbanba waa u caddeeyey, waxaana ay sheegeen inay ku jaango’an yihiin shirka Eldoret. Lix bilood gudahood ayaa laba wafdi oo Mareykan ah ay ku tageen Soomaaliya, kalana soo hadleen kooxaha Soomaalida arrimaha shirka Kenya.
Wafdiga hore, waxaa hoggaaminayey Agaasimaha Waaxda Dibadda Mareykanka ee Geeska Africa, Zachary Teich. Kan dambe oo toddobaadkan ka soo laabtay Soomaaliya, waxaa horkacayey Glenn Warren oo ah sarkaalka safaaradda Mareykanka ee Kenya u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.
Midowga Yurub, sidoo kale waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin shirka. Labada quwadoodba si ficil ah ayay u taageereen nabadeynta Soomaaliya, waxaana ay dhiibeen kharash lagu socodsiiyo howlaha shirka, ha badnaado ama ha yaraadee.
Guntii iyo gabagabadii, koox kasta oo ka mid ah Soomaalida waxa ay qodxaha mudacyada dhaadheer ugu dhigayso shirka Eldoret waa in teeda uun la tixgeliyo, waxaana muuqata in faragelin qarsoon ay qabsoomidda shirka ku dhex jirto.
Ka Qaybgelimeyo Shirka Eldoret
ilaa la saxo khaladaadka... sidaas waxaa yiri ururo warsaxaafadeed kasoo saaray Muqdosho GUJI... oct 8